ikhaya » Okufumaneka » Ukudubula Kwifilimu Yenza La La Land Umsebenzi Wezobugcisa
Emuva kumdlalo, ekugqibeleni ndabona La La Land Kwaye wamangaliswa kwaye yamangaliswa yendalo yokuqala yile filimu. Ngokungafani nezinye iifilimu zakutshanje ezikhutshwe kwaye zikhutshwe ngu hollywood Umshini wefilimu, La La Land Ineziqhamo ze-cinematic ezingenakulinganiswa kule ndawo yokudala esiyibiza ngokuthi 'ifilimu yangoku.'
Njenge Umlawuli wefilimu Kunye nomfaki-zithombe, ndatshintshela ikhamera yokuvumelanisa ngokuqhosha kwamagama. Umlingo ochanekileyo. La La Land Uvakalelwa ngokwenene kwaye uthembekile. Kwimizuzu emininzi kwiminithi engamashumi amabini yokuqala, ndabuza into endikujongayo kwaye ndijonge ngokugxininisa. Umboniso uqala ngomdlalo womdaniso ophezulu kwi-interchange ye-LA, iinqwelo zeemoto ezivela kwi-80 kunye ne-90. Kuphela emva kweemoto ezihamba phambili zijoyina indawo xa uMia (Emma Stone) engena kuye Prius - ngoko. Ngaloo nto, imoto yodwa yimihla ndaye ndazibona kwaze kwaba yintathu yokugqibela yefilimu. Izambatho ze-Retro ayikho i-nostalgic kunye neefowuni eziqhelekileyo ze-fowuni kunye Umhla we-Seagull I-band bhokisi ikhonza, kodwa ayichazi, ixesha. Inyaniso yokuba La La Land Ayinamathele kuyo nayiphi na i-epoch ihlawulisa oku kuphelelwa lixesha okongeza kwimvakalelo yemilingo ye-movie, ukunikezela ngomgangatho wobomi obudlula ixesha.
Emva kokuba ndibuyele ekhaya ukusuka kwidlaterha ndaphanda indlela le filimu yemilingo eyenziwe ngayo. Yam yokuqala epiphany - La La Land Wadutshulwa kwifilimu! Linus Sandgren, UMlawuli wePapasho, yi-junkie ye-film-shot-type. Ukholelwa ukuba ukusebenzisa ifilimu ifomu lobugcisa, njengoko uthi, "I-cinematographer ingenza okungakumbi ngefilimu."
Uninzi lwamafilimu akhe, ngaphandle kweyodwa, adutshulwa kwifilimu kuquka, kwaye ngokugqithiseleyo, Uzamo lasemelika kwaye Uhambo oluyikhulu lwamagqabi. Kodwa ngaba ishishini lijikeleza kwifilimu? Mhlawumbi hayi, kodwa jonga ngapha kwaye uza kubona ezininzi zeeprojekthi ezidutshulwa kwifilimu kubandakanya i-NYU iisms film.
Ukubukela i-cinematography, ininzi La La Land Wadutshulwa 35mm 2x anamorphic 4-perf 2.55: i-1 iCinemaScope usebenzisa i-camera ye-Panavision XL2 ngee-series ze-anamorphic C kunye nee-E series. Ibhalansi yadutshulwa kwi-16MM anamorphic ngenxalenye yesigqibo sokuphela kwephupha xa uSebastian [uRyan Gosling] edlala ipiyano kwiqela lakhe kunye noMia kulaphulaphuli.
Indawo yokuvula yefilimu kwi-overpass ye-freeway yadutshulwa ngokuyinhloko kunye ne-technocrane ngabalingane bethu baseCinemoves, inkampani yaseFlorida esiyithokozile ukusebenza kunye nexesha elidlulileyo le-20. I-technocrane yaxutywa phezulu kwiBiscuit Junior, enye ye-kind-a-kind-silent "drive drive trailer". Oku kwenza ukuba i-technocrane ibe yidola, yandisa kwaye ibuyele ngexesha elifanayo.
(Jonga iwebhusayithi Apcamcars.com/equipment/Biscuit%20Jr Kunye ne Vimeo yangempela demo apha, Vimeo.com/198165867.
I-Steadicam yayisetyenziselwa isahlulo salolu hlobo. Ukulwa nomthunzi we-crane kunye nodonga oluhlula ukhonkco lwaba ngumngeni wokusebenza ngokubanzi, kufuna iintsuku ezininzi ukufeza.
Ukudubula kwifilimu kuthatha ukuzinikela kumanqanaba amaninzi. Umngeni wokuqala kukuqinisekisa abavelisi ukuba indleko ifana ne-digital. USandgren uxela ukuba iindleko zisondele kakhulu. Xa udubula usebenzisa ifilimu uqeda i-DIT's, iindleko ezibizayo "ngokusetyenzwa," kunye neenjini ezinzima. Kungakhathaliseki ukuba ufuna ukuvelisa iifayile zefilimu.
Ngethuba lophando, ndafumanisa ukuba i-Panavision kwafuneka yenze iilensi eziliqela kwimveliso, kuba iilensi ze-amorphic standard azikwazi ukugxila ngokuthe ngqo. I-Panavision yakha i-lens 40MM yenkcubeko engagxininisa ngaphezu kweenyawo ezintathu, ivumela iSandgren ukuba ibe yomeleleyo ize ikhuphe iiflethi ezibanzi. Ngokuqinisekileyo, Panavision Kwafuneka kukhuphiswano kunye neendwendwe ezininzi zekhamera zokuqeshisa kwiimpawu zefilimu ezazifuna iikhamera zefilimu, izakhiwo zekhamera ze-anamorphic design kunye nenkxaso, kodwa izindlu ezimbalwa zokuqeshisa zinalo hlobo lomthamo. Iinqanawa eziya ePanavision!
Umngeni wesibini - okanye ubuchule - ifilimu yinkqubo eyiyo yokusekwa. Njengomlawuli, ndiyakhukhunjuzwa ukuba ukhumbule ukuba unokwenza ifilimu kuphela imizuzu elinesibhozo, ukunyanzelisa ikhefu elifutshane ngokukhawuleza ukuphinda ulayishe kwakhona kunye nekhefu elifutshane ukuze usebenze kunye nomlawuli. Ifilimu ibangela ukuba usebenze ngokungqongqo Ukukhanya okukhoyo, Ngokungafani neekhamera zedijithali ngendlela yazo "yokudala nokukopela ukukhanya"Ukugqiba ishedyuli yokudubula. I-anchors yefilimu kwaye ufuna ukuba ingqalelo ngokubalulekileyo kwizinto ezibalulekileyo ekusetyenzisweni: ukusebenza, abantu, ukusebenza kakuhle kunye nokukhanya kwemvelo.
UMlawuli uDamien Chazelle kunye noDP Sandgren bagxininise ukudubula "ngeyure yomlingo" kwiintsuku ezininzi, bahlaziya ukulandelelanisa iintsuku kunye neenyanga ngaphambi kokudubula, kwaye ukuphumeza ukudubula kokugqibela kwintathu ukuya kwezine kuthatha ngokuhlwa. Enye yeenzuzo ezininzi kule nkqubo ephazamisayo yinto ephawulekayo yantambama esibonakalayo kwi-movie. Zibukeka ngathi zihlanganiswe kwisithuba, kodwa azinjalo. Iimpawu ezininzi La La Land Zide-thabatha ikhamera ihamba isinika isebe lekhamera ezimbalwa amathuba. Ukugxininisa kwiimbonko zobusuku xa usebenza kwi-video yoncedo kufuneka ube yi-bear epheleleyo ye-puller focus!
Ekugqibeleni, uDP uSandgen ubalisela ubungqina befayili yefilimu:
Yonke imibala kwifilimu yinyani. Ukwahlukana kombala kunye neenkcenkceshe ezicebileyo yiyiphi ifilimu ye-celluloid ethatywayo, kwaye ukuzaliswa kwe-DI kwinqanaba eliqhelekileyo. Ukufezekisa eli nqanaba lokuzaliswa kwedijithali, bekufuneka ube nokunyusa i-DI kwi-DI, kodwa udidi lwemibala aluyi kuba khona kwi-digital neg.
Kwakhona, ukuba i-cinematography buffs, i-external externors yadutshulwa kwi-KODAK VISION3 250D I-Film Negative Film 5207, elinganiswe kwi-100 ASA kwaye iqhutywe-i-1 yokuyeka ukutya okusanhlamvu okugqithisiweyo kunye nokugqithisa okungafani. Ukungena emini imini nobusuku kunye nokuhlwa nobusuku badutshulwa kwi-KODAK VISION3 500T I-Color Negative Film 5219, ilinganiswe i-200 ASA kwaye iqhutywe-i-1 yokuyeka ukutya okuziinkozo ezigqithisiweyo kunye nokugqithisa okugqithisileyo. Kulabo abangaqhelekanga ukucocwa, iprojekthi yokuphuhlisa ifilimu ezama ukuhlawulela ifilimu engaphezulu ngokuyikhuphula phantsi. Ukucoca ukusetyenziswa ngokuqhelekileyo kusetyenziswa ukufumana umfanekiso ophantsi ophantsi kweemeko eziphezulu.
Ngokungafaniyo La La Land, Ezimbalwa iifrimu zityhulwa "ngekhamera" kwakhona kuba ukuhlanganiswa, ukubonwa kwe-EFX, kunye nocingo lwefayile kuye kwathatha phambili ngaphezu kokudubula "kwikhamera:" ngenxa yokungasebenzi kuphela kodwa kuba kulula. Kuyandibuza ukuba uMlawuli kunye ne-DP bakhethe ukusebenza ngale ndlela kuba kufana nezindlela ezisetyenziswa kwi-80 kunye ne-90, ngaphambi kokuba BOMVU kwaye i I-Alexa digital cinema kamera. Ukufumanisa le nkalo yefilimu emva kweemifanekiso ihlaziya.
Ekugqibeleni, ngaphandle kokusetyenziswa ngokukhawuleza kweendlela zefilimu ze-Retro, indawo ekhangayo kunye nokuziphatha okusemgangathweni kunye nezinto ezikhethiweyo, into endiyithandayo ngebali kukuba iChazel kunye ne studio ayengenakho ukwesaba ukuphela ngedrama. hollywood Uthiyile iziphelo ezingathandekiyo kwaye abaqhathananga ukufumana ukukhanya okuluhlaza ukuya kwimveliso. Uphapheme! Ngethuba likaSebastian elimnandi ngokulandelelana kwephupha elidlala ipiyano ekupheleni kwefilimu, ndifuna ukuba oku kuyenzeka. Ndigxotha u-Sebastian noMia kuphela ukuba badumale ngenxa yesiphumo. Nangona amaphupha abo aqeqeshiwe azaliseka - uMia uba ngumdlali ophumelelayo, u-Sebastian ungumnikazi we-Jazz club - uMia utshatile kwi-suit-suit kwaye uSebastian ugqiba ukulawula iklabhu yakhe yodwa.
Le filimu i-Oscar ibhalwe phantsi kwayo yonke into, ngoko ayikho into yokuba uSandgren uphumelele kwiCinematographie Best & Chazelle elandelwa nguMlawuli oPhezulu. Kwakukho iindlela ezilula zokwenza le movie, kodwa ukuqaphela i-Oscars kukuxhamla ekuzinikeleni kwabo kwifilimu nokukhupha zonke izitorethi ukwenza i-piece of cinema.
IBhayibhile kunye nokufunda okuqhubekayo:
Ukudubula La La Land kwiCinemaScope nakwifilimu! Www.engadget.com/2015/02/05/kodak-deal-for-movies-on-film/
I-Celluloid yenza i-Returnback: Ukubuyiswa koBuchule kwifilimu kuza ku-NYU
Ikhamera nguDancer: UDP Linus Sandgren Uhamba Ngendlela Yena kunye noDamien Chazelle Shot La La Land
Mongameli at Ukuhanjiswa kweZithombe
UDavid Wells nguMvelisi, uMlawuli / iCameraman, ubuchwepheshe bexesha elide kunye noMongameli we-Moving Picture Rental, i-integrated production services kunye nezindlu zokuqashisa. Iimveliso zaqala kwimboni yefilimu njenge-PA kwiinkomfa zeTV ze-Miami Vice. Iimveliso ziye zavelisa kwaye zikhokela iindidi zomculo, iirhwebo, iimveliso zethelevishini kunye ne-Fortune 500 zoshishino. Uninzi kunje, ama-Wells akhiqizwa aze aqondiswe ngongoma we-addy wokufumana i-Covergirl, i-PwC, i-Harley Davidson kunye ne-Heroes ye-CNN.
Izithuba ezandwendwe nguDavid Wells (ndinibone nonke)
Ukudubula Kwifilimu Yenza La La Land Umsebenzi Wezobugcisa - Juni 29, 2017
2015 Ukunciphisa i-bitrate H264 / H265 eye HDR / WCG HEVC HEVC / AVC Immersive Isovideo I-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, ukunciphisa i-bitrate, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw JCT-VC Ukunciphisa ingxolo UHD / 4K / HD Viarte Warsaw	2017-06-29
Previous: I-Red Giant i-24-Hour Flash Ukuthengiswa kwe-Flash - 25% Off Shooter Suite 13 kunye neeninzi zesiXNXX
next: I-Microphone i-DPA iqhubeka neNkqutyana ye-25th yokuBhiyozelwa ngeeMveliso eziZodwa